DHAGEYSO+AKHRISO: Balan-qaadyadii M/weyne Farmaajo ee fashilmay, Maxaad ka og tahay? – Puntlandtimes
DHAGEYSO+AKHRISO: Balan-qaadyadii M/weyne Farmaajo ee fashilmay, Maxaad ka og tahay?
MUQDISHO(P-TIMES)- Madaxweynaha dawladda Faderaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ku fashilmay balan-qaadyo uu jeediyey markii ay dooranayeen mudanayaasha baarlamaanka, kuwaas oo haddii la fuliyo muhiimad u noqon lahaa waxqabadkiisa uu hadda la sheego.
Madaxweyne Farmaajo wuxuu horey u balan qaaday in uuyareyn doono Safaradiisa wadamada dibada, balse ilaa hadda inta uu xukunka qabtay wuxuu galay safaradii ugu badnaa, wuxuuna wax dhaafay safaradii Hogaamiyihii ka horeeyey.
Wasaaradda Arrimaha dibada ayaa shaqadeedii laga weeciyey, waxaana Wasiirka arrimaha dibada booskiisii galay Madaxweynaha Soomaaliya oo isagu taagan goob kasta iyo shir walba, taas oo muujinaysa in laga been sheegay waxqabadkii Madaxweynaha.
In aan faragalin lagu sameyn arrimaha Baarlamaanka ayaa kamid ahayd, laakiin Gudoomiyihii baarlamaanka Prof, Jawaari ayaa lagu saaray faragalin uga timi Xaafiiska Madaxweyne Farmaajo, markii loo baahday in baarlamaanka laga weeciyo shaqadiisa oo laga dhigo golle aan waxba saameyn ah ku laheyn arrimaha siyaasadda ee dalka.
Ammaanka ayaa kamid ahayd waxyaabaha uu balan qaaday Madaxweynuhu in wax laga qaban doono, laakiin fashilkii ugu cuslaa ayaa dawladdiisa kasoo wajahay dhinacaas, xili qeybo kamid ah caasumadda aysan ciidamada dawladdu waxba ka sameyn karin joogina.
In uu noqonayo Nabadoon Soomaaliyeed oo uu khilaaf oo dhan ka hortagayo ayaa qeyb ka ah balan-qaadyadii fashilmay, waxaana uu hadda Madaxweynuhu dhexda u taagan yahay badweyn siyaasadeed oo gabiyada dawlad gobaleedyada ka timi, waxaana la rumeysan yahay in saaxiibadiisa siyaasadeed ay door weyn ku leeyihiin arrimaha hadda socda.
In aan balanta laga bixin ayaa kamid ahayd balanqaadyada Madaxweyne Farmaajo ee uu jeediyey 7 Feb 2017-kii, balse maanta ayaa la arkayaa wixii lagu heshiiyey oo dhan oo ay ka baxday Madaxtooyada Soomaaliya, taasna ay tahay dhabar jab kale oo siyaasadeed.
Balan-qaadyadii Madaxweyne Farmaajo ee labadaas dhinac kaliya aan ku koobneyn ayaa u muuqda kuwa fashilmay, waxaana lays weydiinayaa hadda xaaladdu xagga ay u jiheysan doonto iyo hubanti la`aanta siyaasadeed ee madaxa ka saaran Madaxda dawladda Faderaalka ee Soomaaliya.